China Trailer n'ibu nkwusioru BPW ụdị factory na suppliers | DaDa
Jiri: Trailer Parts
Max Payload: 16 ton kwa axle
Size: na-ezo aka ịbịaru
Ebe nke Si Malite: Shandong, China, Shandong, China
Brand aha: DADA
Brand aha: DadaAlloy
Anyị na-eji pallet packing.Place ngwaahịa na pallet, dokwaa ya na nchekwa eriri na kechie ya gbatia film, ka e meere ma gbochie dust.If i nwere mkpa ndị ọzọ, ị nwere ike hazie dị ka gị chọrọ.
Duru Time: ụbọchị 30
N'ihi Gịnị Ka Anyị Jiri Leaf Springs maka arọ Vehicles?
A akwukwo spring, ma ọ bụ a ajụjụ spring, bụ a dị mfe ụdị spring-emekarị tinye n'ọrụ maka wheeled ugbo ala. Ọzọkwa, ọ bụ otu n'ime ndị mbụ ụdị springing ochie ụfọdụ. Otu uru nke a akwukwo spring n'elu a mgbe mmiri, nke bụ helical, bụ na akwukwo spring ọgwụgwụ nwere ike ikpegara tinyere a kpọmkwem ụzọ. Akwukwo isi iyi maka arọ ugbo ala nwere ike ofu eku, ma ọ bụ na ọ nwere ike ofu na otu ọgwụgwụ ozugbo, na ndị frontage ejikari ofu site a jikọtara, nke bụ a obere swinging ogwe aka. The jikọtara ewe nchepụta nke akwukwo mmiri ka ogologo ma ọ bụrụ na abịakọrọ. Nke a na-eme ka supple springiness.
Mgbe iji dochie akwukwo iyi
Mgbe ị na nhicha ndị a nkwusioru akụkụ, nke a bụkwa ihe ọma na oge na-elele na-ahụ ma ọ bụrụ na ha mkpa ha na-aga edochi. Lebakwuo anya na onye ọ bụla mmiri na-ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-egosi ndị na-esonụ ama:
A akwukwo spring na nke ahụ bụ budata ito eto karịa ndị ọzọ - Nke a na-esi n'aka na ụgbọala gị nwere a akpọ tilt ma n'aka ekpe ma ọ bụ n'akụkụ aka nri. Ọ bụrụ na ndị sag bụ ịrịba ma ọ bụ nnọọ doro anya, na-eji dochie-eyi na-akwukwo spring dị ka anya dị ka o kwere.
Kụwaa spring - gbawara agbawa ma ọ bụ fractures ike-welded, otú i nwere na-a ọhụrụ spring ma ọ bụrụ na nke ochie ahụ na-egosi ndị a ihe ịrịba ama.
Idiọk corroded ngwaike - Shackle mkpọ, akụ, na ị-bolts ejikọta bụla spring kwesịrị free si ajari. Ọ bụrụ na ndị a n'akụkụ na-egosi na oké corrosion, ọ bụ oge itinye ego na ọhụrụ iyi.
Ugbu a pụrụ ịnwa gị iji weghachi idiọk mebiri emebi iyi onwe gị. Otú ọ dị, nke a bụ n'ezie ihe amamihe kemgbe ọrụ bụ nnọọ ike, na-eri oge, na-achọ pụrụ iche akụrụngwa. Your mma nzọ ga-ka a ọkachamara na-arụ ụgbọ ahụ nnọọ eyi-ma ọ bụ mebiri emebi iyi.
Previous: Ọkara trailer akwukwo iyi maka BPW, FUWA ụdị
Osote: Akwukwo spring maka ikuku nkwusioru
Iche iche na ụdị Leaf Spring
Ọkara ụgbọala akwukwo spring
Oké ọrụ ụgbọala akwukwo spring maka BPW nkwusioru ...
Trailer akwukwo spring TRA 3319
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile Car Leaf Spring, Shacman Heavy Truck Parts Front Leaf Spring, Wide Body Car Leaf Spring, Heavy Truck Leaf Spring 52crmnba,